Sunday, 17 Jun, 2018 11:24 PM
‘तिम्रो तामाङ्नी सासूआमा । अब के गर्ने ?’ अस्मिताले अत्तालिँदै भनिन् । ‘कहाँ आइपुग्नुभयो त सासूआमाचाहिँ ?’ ‘गौशला’ । लौ फसाद प¥यो । हतारहतार धुन बाँकी रहेको एकजोर कपडा छिटछिटो धोइपखाले र कौसीमा लुगा सुकाएर झरिहाले । र, बौद्ध नयाँ बस्तीमा डेरा लिएर बसेका गाउँका शान्तिराम काकालाई फोन घुमाए । फोन लाग्यो । ‘हल्लो के छ, वसन्त भतिज ?’ ‘ठीकै छ । काका । तपाईं अर्जेन्ट यहाँ आइदिनु¥यो । बाँकी कुरा बसेर गरौँला । गाउँबाट सासूआमा अस्मितालाई लिन आउँदै छन् ।’ ‘कहिले आउने ?’ शान्तिराम काकाले अचम्म मान्दै सोधे । ‘अहिले भर्खरै । चाबहिल कटिसके होलान् ।’ ‘ हँ ! ल ल’ म आइहालें । शान्तिमराम काकाले फोन नराख्दै अस्मिताको मोबाइलमा सासूआमाको फोन आयो । डराउँदै अस्मिताले लाउडस्पिकर अन गर्दै फोन उठाइन् । ‘ओइ ! तेरो कोठा कहाँनिर हो । हामी बौद्धको गेटमा छौँ ।’ ‘हजुर ! हजुर...’ अस्मिताले के गर्ने ? भन्ने शैलीमा मलाई चिमोटी । ‘आत्था’ गर्दै मैले कोठातिरै आउन निर्देशन दिएँ । सासूआमालाई समता स्कुल अगाडि आएर बस्न आग्रह गरिन् । र, अस्मिता आमालाई लिन समता स्कुलतिर लागिन् । तर, शान्तिराम काका आइपुगेनन् । मैले अरू दुई÷चार गाउँका आफन्तलाई आफ्नो समस्या दर्शाउँदै फोनबाटै चाँडो आउन बोलाए ।
सासूआमा, तीन जना भुसतिग्रे केटा र अस्मिता टुप्लुक्कै कोठाको गेटमा देखा परे । के गरुँ गरुँ भयो । उनीहरू घरको सिँढी चढ्दै गरेको आवाज सुनियो । त्यसपछि मैले आफ्नो खातापाता पल्टाएजस्तो गरेँ । सबैलाई अस्मिताले घरभित्र हुलिन् । ‘आमा’ अस्मिताले मलाई ढोग गर्न निर्देश दिइन् । ‘नमस्कार ! ममी’ भन्दै सासूआमाको गोडा ढोग्न एक पाइला अघि बढेको थिएँ । बिजुलीको तारमा करेन्ट बहेर बल्नै लाग्दा झ्याप्पै बत्ती गएसरी सासूआमाले करेन्टको भट्का आफूतिर तान्दै भनिन्, ‘यो चोरचाहिँ को हो ?’ मुखबाट यस्तो रुखो शब्द निकाल्दै सासूआमाले खुट्टा ढोग्न दिइनन् । त्यसपछि मैले पनि खुट्टा ढोग्ने प्रयास गरिनँँ । अस्मिताले सासूआमालाई खाटमा बस्न अनुरोध गरिन् । तर, सासूआमा बम्किन थालिन् । ‘म बस्न आएको होइन । तेरो लुगाफाटो कहाँ–कहाँ राखेकी छेस् । छिटोभन्दा छिटो रेडी गर् ।’ ‘तर, आमा...’ भन्दै अस्मिताले सासूआमालाई सम्झाउन खोज्दै थिइन् । ‘तर..सर..का कुरा छाड खुरुक्क पोकोपुन्तोरो भारी हालेर हिँड ।’ भन्दै सासूआमा लुगा राखिएको दराजतिर अघि बढिन् । भाइ त्यहाँ ठिङ्ग उभिएको थियो । ‘तँचाहिँ को होस् ?’ मेरो बाटो छोड् । भाइ केही बोलेन । अस्मिता रोक्न खोज्दै थिइन् । आमा आफ्नै सुरमा अघि बढ्न लाग्दा शान्तिराम काकासहित तीन जना गाउँकै दाइहरू आउनुभयो । तैपनि, आमा जबर्जस्ती दराज खोल्न तम्सिइन् । ‘नमस्कार है सबैलाई’ शान्तिराम काकाले सासूआमातिर विशेष फोकस गर्दै दुई हात जोडे । त्यसपछि आमा केही मत्थरझैँ भइन् । सासूआमापट्टिका तीन जना केटासित परिचय गर्दै शान्तिराम काकाले कुराकानीलाई अघि बढाउन के खोजेका थिए, सासूआमाले मतिर हेर्दै त्यहीँ रुखो शब्द उच्चाहरण गरिन्, ‘तिमीचाहिँ यो नामर्दाको को ?’ काकालाई रिस उठेको थियो होला तर शालिन हुँदै जवाफ दिए, ‘म उसको गाउँले काका ।’ ‘ए !’ भन्दै सासूआमाले मलाई निशाना बनाइन् ।
अर्काको चोरेपछि सहनुपर्छ’ भन्ने संकेत दिए । र, त्यसैगरी चुप लागेर बस्न थाले । गर्मीले होला काका असिनपसिन हुनुभएको थियो । तर, सासूआमा ‘ट्याउँ ट्याउँ’ बोलिरहेकी थिइन् । त्यसपछि काकाले भाइलाई चिसो लिन पठाए । एकछिन चुपचापझैँ सबै देखिए । केहीछिनमै भाइले जम्बो डिउ लिएर आयो । सबैलाई चिसो बाँड्यो । फेरि सासूआमाले व्यहोरा देखाइहालिन्, ‘तेरो चिसो तैँ खा !’ भन्दै गिलासको चिसो बाहिर फ्यालिन् । मेरो कन्सिरी तात्नसम्म तात्यो । एक भोल्ट थाम्न सक्ने चिमलाई सय भोल्टको झड्का लागेझैँ मैले कोठा अँध्यारो देखेँ । ‘यस्तो...’ के मात्र भन्न खोजेको थिएँ । फेरि काकाले सय भोल्टको तार अफ गरिदिए । उसै त निहँु नचाहिने सासूआमा मलाई कुटौंलाझैँ शैलीमा झम्टिइन्, ‘के धाक देखाउँछस् । यसलाई ल्याएदेखि एकजोर लुगा लगाइदिएको छस् । थुक्क । कसरी पाल्छस् ।’ त्यसमाथि फेरि थपिन्, ‘अब, मेरी छोरी अमेरिका जान लागेकी छ । उसले पठाएको पैसाले अरूसँग मोजमस्ती गर्छु भन्ने तैंले सोचेको होलास् तर दिन्नँ ।’ ‘हिँड्, अस्मिता जाऊँ’ भन्दै सासूआमाले अस्मिताको पाखुरा समाइन् । तर, अस्मिताले मानिनन् । र, कसरी मान्थिन् । हामीले सयौँ जुनिसम्म सँगै जिउने र मर्ने कसम खाएका थियौँ । कुनै स्वार्थपूर्तिका लागि हामीले विवाह गरेका थिएनौँ । एउटा अमर जोडीका रूपमा हामीले आफूलाई चिनाउँदै थियौँ । तर, यतिबेला फेरि अर्काे आँधीहुरी चल्यो र अस्मितालाई उडाएर लैजान खोज्दै थियो ।